Usihlalo weBhodi yoKhenketho yase-Afrika Usasaza uMyalezo weThemba eKilimanjaro
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » Usihlalo weBhodi yoKhenketho yase-Afrika Usasaza uMyalezo weThemba eKilimanjaro
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel
USihlalo weBhodi yezoKhenketho ye-Afrika Umyalezo weThemba
Ethwele umyalezo wethemba kuphuhliso lwezokhenketho e-Afrika, uSihlalo weBhodi yezoKhenketho yase-Afrika (i-ATB) u-Cuthbert Ncube utyelele iNtaba i-Kilimanjaro, eyona ndawo iphakamileyo e-Afrika, ekunye noonozakuzaku abaphambili bebhodi yakhe.
Usihlalo we-ATB ebeseMantla eTanzania ukusukela kwiveki ephelileyo, ethatha inxaxheba kuMboniso woKhenketho weNgingqi ye-Afrika eseMpuma (EARTE) ophele ekuqaleni kwale veki.
Sikhatshwa liqela loonozakuzaku be-ATB abavela kumazwe ahlukeneyo ase-Afrika, uSihlalo we-ATB watyelela eMarangu, kwiKomkhulu le-Kilimanjaro National Park.
Batyelele nesango lokungena kukhenketho lweNtaba iKilimanjaro.
The IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika (i-ATB) Utyelelo lukaSihlalo kwiNtaba iKilimanjaro lubonakalise ukuzibophelela kweBhodi ekuphuhliseni ukhenketho lwase-Afrika, kusasazwa umyalezo wethemba lokuvuselelwa kwezokhenketho kwintshabalalo ye-COVID-19 kunye nomongo wophuhliso lokhenketho lwenqila nakwelama-Afrika.
INtaba i-Kilimanjaro kunye neendawo ezingqongileyo ziphakathi kwezona ndawo zikhokelayo kubakhenkethi basekhaya, bengingqi nabakumazwe ase-Afrika apho amawaka eeholide achitha iiholide zekrisimesi nezonyaka omtsha neminyhadala ye-Ista.
I-Tanzania yalayita i "Freedom Torch" edumileyo kwincopho yeNtaba i-Kilimanjaro kwiminyaka engama-60 eyadlulayo, ngokomfuziselo yayikhanyisela ngaphaya kwemida kwaye izise ithemba apho kukho ukuphelelwa lithemba, uthando apho kukho ubutshaba, kunye nentlonipho apho kukho intiyo. Kodwa kulo nyaka, abakhweli baya kwincopho yeNtaba i-Kilimanjaro, ke njenge-ATB, bazakuthumela umyalezo wethemba lokuba iTanzania kunye ne-Afrika yindawo ekhuselekileyo yokundwendwela abatyeleli ngelixesha xa umhlaba ulwa nobhubhane we-COVID-19 ngogonyo namanye amanyathelo ezempilo.
Emva kokushiya iKilimanjaro, uSihlalo we-ATB kunye neqela lakhe batyelela iPaki yeSizwe iMkomazi, ekuphela kwendawo yokuzala yemikhombe eMpuma Afrika. Ifumaneka kwiiNtaba zePare zeMpuma yeArc, le paki iphantsi kolawulo lweeTanzania National Parks (TANAPA) kwaye ibekwe malunga neekhilomitha ezili-120 kwimpuma yedolophu yaseMoshi kwingingqi yeKilimanjaro phakathi kwemijikelezo yomantla kunye nezantsi yeTanzania.
Imikhombe ikhuselwe ngaphakathi kwendawo ebiyelweyo ebiyelweyo ebukhulu buziikhilomitha ezingama-55, engaphakathi kwipaki yesikwere seekhilomitha ezingama-3,245. Abakhenkethi banokuzibona ngokulula ezi zilwanyana zingezantsi zaseAfrika ngokulula kunalezo zisemathafeni asendle. Imikhombe emnyama yayihamba ngokukhululekileyo phakathi kweMkomazi kunye ne-Tsavo ecosystem egubungela iTsavo West National Park eKenya.
Ngokudibeneyo ne-Tsavo, uMkomazi wenza enye yezona ndawo zikhuselekileyo zendalo emhlabeni. IMkomazi, ecaleni koMlambo i-Umba, inezinkawu ezininzi ezinqabileyo ezihamba phakathi kwamahlathi omlambo. Ipaki inemozulu esomileyo enesimo sokuhambisa imvula bimodal. Ipaki nayo ityebile kwiintlobo zezilwanyana ezanyisayo. Zingaphezu kwama-450 iintlobo zeentaka ezirekhodiweyo epakini, kunye nenani lezityalo nezilwanyana ezizodwa. Iphakathi kweendawo ezimbalwa ezikhuselweyo eTanzania ezinabantu abaninzi nababonakalayo be-gerenuk kunye noxinaniso olukhulu lweBeisa Oryx. Le paki yenye yezona ndawo zityebileyo e-savanna e-Afrika kwaye kwihlabathi liphela ngokwenani lezilwanyana ezinqabileyo nezinqabileyo kunye neentyatyambo ezingqinwa bubukho bezinja zasendle kunye nemikhombe emnyama.
Ngexesha lotyelelo lakhe eTanzania ukusukela kwiveki ephelileyo, uMnu Ncube wenze intetho Ibhaso le-ATB le-Continental Tourism 2021 kuMongameli waseTanzania, uSamia Suluhu Hassan, ukwamkela ukuzibophelela kwakhe kuphuhliso lwezokhenketho lwaseTanzania. Ukunikezelwa kwebhaso le-ATB kumongameli waseTanzania kwenzeke ngexesha lokuvulwa ngokusesikweni kwe-First East African Regional Tourism Expo (EARTE) ebibanjelwe kwisixeko sabakhenkethi eMantla e-Arusha. UMongameli wayekhokele ekuqulunqeni uxwebhu lweRoyal Tour olubonisa iindawo zokhenketho zaseTanzania, phakathi kwamanye amanyathelo awathathe ngokwakhe ukuphucula uphuhliso lwezokhenketho eTanzania naseAfrika.